Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mety hosoka ny visa mpizahatany any Kambodza
Ireo mpitsidika mangataka e-visa ho an'i Kambodza dia ampandrenesina mba hanamarina ny tranonkalan'ny Ministeran'ny raharaham-bahiny Kambôdziana sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena ao Kambodza. Misy tranokala sandoka hampiroboroboana ary ny mpizahatany very vola aloa amin'ny mpisoloky.
Nampitandrina ny minisitera fa tsy hampiasa ny tranokala ofisialiny toy ny any ihany.
Ny tranokala bogus dia misy ny cambodiaimmigration.org, izay nampandoavina 300 $ ny mpizahatany iray izay nilaza fa afaka mahazo e-visa ho an'ireo mpitsidika ilay Fanjakana.
Teratany anglisy iray no nitaraina tany amin'ny Masoivoho Kambodziana any Londres momba ny vidin'ny e-visa tafahoatra taorian'ny nanamelohana azy ireo $ 90 tamin'ny tranokala toy izany, izay mihoatra lavitra noho ny vidin'ny ministera. Raha ny filazan'ny minisitera ny fangatahana visa e-visa ho an'ny mpizahatany dia tokony hatao ao evisa.gov.kh. Ny visa dia manan-kery mandritra ny telo volana ary mitentina 36 $.
Namoaka taratasy ny minisitera tamin'ny 2017 nilaza fa nahita tranonkala 17 izay mivarotra hosoka amin'ny visa amin'ny mpizahatany amin'ny vidiny lavitra mihoatra ny vidiny tena izy ao amin'ny tranonkalan'ny minisitera.
Tho Samnang, tompon'andraikitra iray ao amin'ny Departemantan'ny Legal sy Consular ao amin'ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny, dia nilaza tamin'ny haino aman-jery ao an-toerana fa ireo ao ambadik'ireo tranonkala sandoka ireo dia nampiasa rafitra arifomba mba hamitahana ireo mpampiasa.
Rehefa nanoratra tamin'ny teny hoe "Kambodza" sy "e-visa" ireo mpangataka dia mampiseho tranokala sandoka izay nanome vola mba haseho voalohany amin'ny valiny, hoy izy. Rehefa tsy fantatry ny mpangataka fa diso ireo tranokala ireo dia misoratra anarana izy ireo, mameno ny taratasy ary mandefa vola.
Ny mpikambana iray ao amin'ny orinasam-pizahantany Phnom Penh dia nilaza fa tsy fantany ireo tranonkala manolotra e-visa, ary nilaza fa ny Ministeran'ny raharaham-bahiny sy ny tranokalan'ny ofisialiny ihany no afaka maneho hevitra momba an'io toe-javatra io.